Miyaa Dalalka Saboolka ah Laga Qadin Doonaa Tallaalka Caabuqa Safmareenka ah Covid 19? | JAMHURIYADDA
Home Caafimaad & Nolol Miyaa Dalalka Saboolka ah Laga Qadin Doonaa Tallaalka Caabuqa Safmareenka ah Covid...
Hay’adda FDA ayaa si lama filaan ah u siisay oggolaashaha degdegga ah Pfizer, si loo xakamadeeyo caabuqa safmareenka ah ee dunida ku laayey dad kor u dhaafay malyan iyo bar, islamarkaas aafeeyay dad ku dhow 71 malyan. Warbixin soo shaac baxday Talaadadii ayaa lagu faahfaahiyey in khubaro la taliyayaal dibaddeed u ah maamulka hay’adda FDA ee Mareykanka ansaxiyeen waxtarka iyo badbaadada talaalka Covid-19 ee shirkadaha Pfizer iyo BioNTech.
Shirkadda Pfizer ayaa codsatay in loo oggolaado inay tallaalka la siiyo dadka da’doodu u dhaxeyso 16 ilaa 85 sano. Balse sida warbixinta ay ka muuqata guddiga khubarada ayaa isku qabtay in dadka tallaalka qaadanayo laga reebo da’da 16 iyo 17 maadaama halista aafaynta caabuqu ku yar yahay da’daas. Waxay rumeysan yihiin haddii lagu daro in natiijadu noqon doonto mid aan sax ahayn.
Ansixinta talaalka Pfizer iyo BioNTech ayaa yimid waqti ay su’aallo ku gadaaman yihiin xasaasiyad lagu arkay dad qaatay horraantii toddobaanka kaddib markii Britain (UK) ay bilawday inay bixiso. Madaxda Caafimaadka ee UK waxay ku taliyeen in tallaalka laga daayo dadka lagu ogyahay inay qabaan xasaasiyad hore oo xoog leh (Serious History of Sever Allergic Reactions). Balse waxaa la rumeysan yahay in “faa’iidada tallaalku ay ka badan tahay halistiisa.” Waxay kaloo dood ka taagan tahay macluumaad cusub oo sheegaya in bukaannada qaatay tallaalku lagu arkay madax-xanuun amase gacanta la tallaalay oo barartay. Haseyeeshe, astaamahan waa kuwa loo yaqaan Baalsocdayaal (Side effects). Waxaa la filayaa in December 17, 2020 guddi kale uu ka doodi doono tallaal ay sameysay shirkadda Moderna.
Dadaalka hanka leh oo lagu abuurayo caddaalad tallaal oo calami ah ayaa u muuqda in la wiiqayo. War ka soo yeeray jaamacadda “Duke University Global Health Innovation Center” ayaa sheegaya in waddamada qaniga ah ay boobayaan tallaalka kor hor inta aan la soo saarin.
Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech waxaa laga filayaa inay 25 malyan quraarad u gudbin doonto dowladda Mareykanka oo caabuqa ku laayey dad kor u dhaafay 300 kun, islamarkaas ku aafeeyay in ka badan 16 malyan. Shirkada Moderna waxaa iyana Mareykanku ka iibsaday 100 malyan quraaradood oo tallaal ah.
Warbixinta Duke waxay muujineysaa in dalka Hindiya uu iibsaday ilaa 1.6 malyan quraaradoo, inkastoo tallaalku uusan weli suuqa soo gelin. Hindiya waxay ka mid tahay dalalka ku hawlan warshadaynta tallaalka, waxayna soo saartaa 60% tallaallada adduunka.
Bankiga Adduunka ayaa dalalka soo koraya u oggolaaday lacag dhan 12 bilyan doolar oo qayb ka ah 160 bilyan oo uu ugu talaggalay in la isticmaalo ilaa 2021, si dalalkaas soo koraya u iibsadaan uguna qaybiyaan dadweynahooda tallaalka Covid-19.
Dalal ay ka mid yihiin Shinaha iyo Ruushka ayaa iyaguna ku tartamaya inay soo saaraan tallaal waxtar leh. Shirkadda Sinopharm ayaa soo saartay tallaal “Sinovac” oo ah kuwa ugu cadcad Shiinaha ayaa weli diyaar u ahayn in la suuq geeyo tallaaladooda. Haseyeeshee, dowladda Imaaraadka ayaa tijaabisay Sinovac waxayna sheegtay in wax-ku-oolkiisa uu yahay 86%, laguna kaydin karo qaboojiye caadi ah halka tallaalka Pfeizer uu u baahan yahay xaraarada darajo -70 (BBC.COM 10/12/2020).
Ruushka waxuu bilaabay in Sputnik V oo soo baxday August uu qaybiyo, inkastoo ay weli ku socoto tijaabooyin tiro badan si loo xaqiijiyo waxtarkeeda iyo badbaadadeedaba.
Waxay u muuqataa in tallaalka boqolkii sagaashan ay ka faa’iideysan doonaan dalalka qaniga ah, halka kuwa saboolka ah loogu taloggalay boqolkii 10 keliya. Waxaase la yaab leh in aafada caabuqa dalalka qaniga ah ay faraha ka baxday, taas oo astaan u ah caddaalada Eebe.
Maqaalka waxaa laga yaabaa inuusan u qorneyn qaabkiisii ugu dambeyay oo waa la cusbooneysiin karaa ama dib loo eegi karaa mustaqbalka. Masawirka: Internetka ayaa laga soo
Previous articleMaxaa Kibirkii Uhuru Kenyatta Jibiyey Maxuuse Ka Qaban Karaa Abiy Axmed?
Next articleMaxaa Kusoo Beegay Mudaaharaadka Hubeysan Maalinta Kenya Loo Jaray Xirrirka?